के पुननिर्माण प्राधिकरणका सिईओ चुनाव लड्दैछ्न ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
के पुननिर्माण प्राधिकरणका सिईओ चुनाव लड्दैछ्न ? – NEWS24 TV
७ लाख बढि भुकम्प पिडितले पुनर्वास नपाउँदै दोस्रो पटक पाएको जिम्मेवारी लत्याएर चुनावामा होमीन लागेका राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणका प्रमुख कार्याकारी निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलको बिषयमा हामीले यस अघिको कार्यक्रम रिपोटीङ गरेका थियौँ । पोख्रेल प्युठानबाट नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट प्रतिनिधीसभाको लागि उमेदवारमा सिफारीस भएर चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । साथै उनलाई सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर चुनाव प्रचारप्रसारको काममा लागेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । उनले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण समयमै बुझाएका छन्, जसमा आफुले निर्वाचन आचार संहित उलंघन नगरेको बताइएको छ ।